Archive du 20170306
Ravalomanana tany Antsirabe �1er tour dia vita��
Tonga niatrika ny fambolen-kazon�ny Distim ny filoha Ravalomanana Marc ny sabotsy 4 martsa lasa teo.
Fitondrana HVM Manomboka sahady ny tery vay manta
Io fa mipoitra ny toetrany ! Vao fankalazana ny 8 martsa dia efa manao tery vay manta ity fitondrana ity. Mibaribary izany eto an-drenivohitra, indrindra ny eny anivon�ny asam-panjakana toy ny minisitera.
Fanovana governemanta Maneho hevitra ireo mpisehatra politika
Matoam-baovao hatramin�ny fiandohan�ny taona 2017 ny tsy maintsy hirosoan�ny filohan�ny Repoblika amin�ny fanovana ireo mpikambana ao amin�ny governemanta.
Taratasin�i Jean Eny ho aho e !
Miarahaba Jean a ! Eny ho aho e ! Aleo ekena fa manaja ny fahalalahana tokoa ianareo mba tsy hifandirana e !
8 martsa Hatao andro fisaonana ho an�i Besalampy
Noho ny raharaha misy any an-toerana ka mahasaringotra ny zanak�i Besalampy maro izay voatazona any amin�ny fonjan�i Mahajanga ankehitriny dia nanapa-kevitra izay vehivavy any amin�ity distrika ity fa hatao andro fisaonam-pirenena ny ho an�i Besalampy ny andron�ny 8 martsa 2017.
Fitsidihana an�i Befandriana Mbola ifanilihan'ny mpitondra ?
Efa nisy vokany ny fanadihadiana natao mikasika ny raharaha Befandriana Avaratra na ny kaominina ambanivohitr�Antsakabary, hoy ny praiminisitra Mahafaly Olivier,
Fankalazana ny 8 martsa Mifaninana ireo mpanolotsain�i Voahangy R.
Hanamarika ity herinandro vao miandoha ity ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an�ny vehivavy, izay marihina isan-taona isaky ny 8 martsa. Somebiseby ireo tomponandraiki-panjakana isan-tokony.
Rivo-doza � Enawo � Atahorana handravarava
Omaly tamin�ny 03 ora tolakantdro dia tany amin�ny 585 Km Avaratra Atsinanan�Antalaha no nisy ny foiben�ilay rivo-doza nampitondraina ny anarana hoe � Enawo �.
Fanampiana an�i Befandriana Tonga nisolotena an�i Mahajanga ny depiote Nina
Azo lazaina ho fahombiazana tamin�ny ankapobeny ilay hetsika nokarakaraina tetsy amin�ny kianjan�ny Kanto Mahamasina nentina nanampiana ireo fianakaviana 470 tafo may trano tany amin�ny tan�nan�Antsakabary, distrikan�i Befandriana Avaratra
IHARINARIVO AMBOHIDRATRIMO Mitady hangorona tany indray ny Sinoa
Mandeha ny feo ao amin�ny kaominina ambanivohitra Iharinarivo Ambohidratrimo amin�izao fotoana fa misy tany ana hektara maro kasain�ny sinoa alaina ao an-toerana.
Efa ela no niketrehana sy nikotrehana ny fampihavanam-pirenena teto amintsika, saingy tsy mbola tanteraka hatramin�izao. Dia samy velom-panontaniana ny rehetra hoe rahoviana ihany ? Fampihavanana politika no ilaina eto, raha halalinina ny zava-misy.
FIVAZA ANTANANARIVO Nanome ra tetsy amin�ny HJRA Ampefiloha
Nisantatra ny fankalazana ny andron�ny 8 martsa omaly ny FIVAZA (Fikambanan�ny VAdina Zandary) eto Antananarivo.